३९ चिनियाँ नागरिक कसरी मारिए ट्रकभित्र ? «
३९ चिनियाँ नागरिक कसरी मारिए ट्रकभित्र ?
प्रकाशित मिति : 25 October, 2019 9:28 am
लण्डन । गएको बुधबार बेलायतको इसेक्समा एउटा ट्रक भित्र भेटिएका ३९ शवहरु चिनियाँ नागरिकहरुको भएको पुष्टि गरिए पनि ती मानिसलाई कसले, कहाँ हत्या गरेर त्यहाँ पुर्यायो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन । साथै उनीहरु को हुन् र परिवारका सदस्य कहाँ छन् भन्ने व्यक्तिगत पहिचानको बारेमा पनि अझै केही पत्ता लागेको छैन ।
सुरुमा बुल्गेरियाबाट ती शव बेलायत पुगेको बताइएकोमा अहिले बेल्जियमबाट प्रवेश गरेको जनाइएको छ । सीमा क्षेत्रबाट त्यति धेरै मानिसको शव बेलायत जस्तो कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको मुलुकमा कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा अझै पनि वास्तविकता खुलेको छैन । ती चिनियाँ नागरिकहरु कसरी, कहाँबाट ल्याइए, कहाँ मारिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै रहस्यमै छ ।
यद्यपि बेलायत र बेल्जियम स्थित चिनियाँ दूतावासहरुले सम्बद्ध देशका अधिकारीहरु सँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन् । बेलायतका लागि चीनका राजदूत लियो शियामिंगले ट्विट गर्दै भनेका छन्,‘‘भारी मनका साथ मृत्युको रिपोर्ट पढ्यौं । हामी बेलायती प्रहरीको सम्पर्कमा छौं ।’’
सो ट्रकका ड्राइभर मो रोबिन्सनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उनीमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले २४ घण्टाको समय मागेकोमा अदालतले अनुमति दिएको छ ।
उक्त ट्रकमा ८ महिला र ३१ पुरुषको शव वातानुकुलित वातावरणमा राखिएको भेटिएको हो । ट्रकका चालक रोबिन्सन उत्तरी आयरल्याण्डका हुन् । प्रहरीले उत्तरी आयरल्याण्डका ३ स्थानमा छापा मारेको छ । नेशनल क्राइम एजेन्सी यो अनुसन्धानमा जुटेको छ । यो मामिलामा संगठित आपराधिक समूह सामेल छ कि छैन भन्ने कुरा उसले पत्ता लगाउने बताइएको छ ।
चालक रोबिन्सनका पिताले आफ्नो छोराको गिरफ्तारीको कुरा आफूले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको जनाएका छन् । उनले रोबिन्सन यस मामिलामा फसेको हुन सक्ने दाबी गरे पनि त्यो कुरा अनुसन्धान पछि मात्रै खुल्नेछ ।
शवलाई चेम्सफोर्डको ब्रुमफिल्ड अस्पतालको मुर्दाघरमा पठाइएको छ । इमिग्रेसन सर्भिस युनियनका १ अधिकारीले भनेअनुसार बेलायतमा हरेक दिन यति धेरै संख्यामा कन्टेनर आउँछन् कि सबैको भित्र के छ भनेर जाँच्न मुश्किल छ । कुनै खुफिया रिपोर्ट आएको अवस्थामा मात्रै उनीहरुले त्यस्ता सवारी साधन जाँच गर्छन् । बुल्गेरियाको विदेश मन्त्रालयले सो ट्रक आयरल्याण्डका १ नागरिकको नाममा दर्ता रहेको जनाएको छ ।
पश्चिमा मिडियामा चीनमा असमानता बढेका कारण थुप्रै मानिसहरु ज्यानको बाजी राखेर पश्चिमा मुलुकमा जानुपरेको र त्यसले गर्दा मानव तस्करको उनीहरु शिकार हुने गरेको चर्चा गरेका छन् । अमेरिका सँगको ट्रेड वारका कारण चीनमा उद्योग बन्द भएको र बेरोजगारी बढ्दै गएका कारण मध्यम वर्गका चिनियाँ लुकेर विदेश गइरहेका छन् ।
यसअघि पनि चीनका नागरिकहरु यसैगरी पटक-पटक बेलायतमा ट्रकमा मृत अवस्थामा भेटिएका घटना रहेका छन् । अहिलेको घटना कसरी भएको हो भन्ने कुराको अझै रहस्य खुलेको छैन । तर, यसरी यति ठूलो संख्यामा मानिसको शव भेटिएको घटनाले विश्वलाई नै अहिले स्तब्ध पारेको छ ।
यद्यपि ती नागरिक चीनकै भएको बताइए पनि उनीहरु चीनकै हुन् भन्ने ठोस प्रमाण के हो भन्ने अझै खोलिएको छैन । (बीबीसीबाट)